/Blog/nandrolone decanoate , Nandrolone Phenylpropionate/Nandrolone Decanoate powder vs Nandrolone phenylpropionate powde
ezaposwa ngomhla 04 / 05 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo nandrolone decanoate, Nandrolone Phenylpropionate.
Yintoni i I-Nandrolone Decanoate powder(Deca)?
I-Nandrolone Decanoate yi-anabolic steroid ethandwa kakhulu eline-hormone ye-steroidal eNandrolone kwaye iqhotyoshelwe kwi-Estanoate ester enkulu. I-hormone ye-Nandrolone yokuqala yabonakala kwi-1960 kwaye iqhutyelwe ukusetyenziswa kwezorhwebo kwi-1962 ngu-Organon phantsi kwegama loshishino iDafa Dolbolin. Ukususela ngelo xesha iinguqu ezininzi ze-Nandrolone Decanoate ziye zatshengisa intengiso, kodwa i-Deca Durabolin isoloko eyaziwayo. Le yayingekayena iqela lokuqala le-Nandrolone elalidalwe, eliya kuba yi-Organon's Durabolin, ngokukhethekileyo iNandrolone Phenylpropionate. Inkolelo yePenylpropionate ihamba ngokukhawuleza ngokusebenza ngokungapheli ixesha elide, kwaye ngelixa iifenylpropionate iifom zithandwa, iCaaa Durabolin inkulu ilawula i-market Nandrolone.
I-Nandrolone Decanoate yenye yezonabolic steroids ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo phakathi kwabadlali abaphucula ukusebenza. Kuyaziwa ngokuba yinto enobuncwane kakhulu yenkxaso ye-steroid yexesha, kodwa iyintandokazi kwiindidi ezininzi zezemidlalo zokufumana izibonelelo zonyango. Ngenxa yeenzuzo ezinzulu zokwelapha, i-hormone ye-Nandrolone enye ye-anabolic steroids enenzuzo kakhulu kwizonyango. Nangona kunjalo, ngenxa yempikiswano ye-anabolic steroid ukusetyenziswa okunjalo kuye kwancipha kakhulu e-US iminyaka emininzi. Ngaphandle kwe-US Deca Durabolin isoloko idume kakhulu kwizicwangciso zonyango ezinokuthintela indawo ezininzi.
Yintoni i Nandrolone phenylpropionate(NPP)?
I-Nandrolone i-Phenylpropionate yi-anabolic steroid efana ne-popular Nandrolone Decanoate compound. Nangona kunjalo, i-Nandrolone Phenylpropionate yayiyinxalenye yokuqala ye-Nandrolone eyayithengiswa ngokuthengisa. I-Nandrolone iPhenylpropionate yawafaka iitrhefti ze-1950 kwaye yaziswa emakethe ngo-Organon phantsi kwegama elithi Durabolin. Kungekudala emva kokuba i-Organon ikhulule umzala wayo waseCroanoate phantsi kwegama elithi Deca Durabolin.
I-Nandrolone Phenylpropionate yi-ester base anabolic steroid kwaye ibizwa ngokuba yiNPP. Le mveliso ayizange ithandwe njengenguqulo enkulu ye-ester Decanoate, inxenye ngenxa yokufumaneka; Nangona kunjalo, kwixesha lanamhlanje sele liqale ukuqala ukuhlaziywa kokubambisana kunye nokubonga ngenxa yenxalenye yeebrabhu zangaphantsi.
Yintoni i I-Nandrolone Decanoate powder?
Igama: iNandrolone Decanoate / DECA
I-Formula ye-Molecular: C28H44O3
Isisindo somzimba: 428.65
I-Melt Point: 33-37 ℃
Umbala: I-White ukukhanya kwipowstalline eluhlaza
Yintoni i Nandrolone phenylpropionate powder?
Igama: Nandrolone phenylpropionate / NPP
I-Formula ye-Molecular: C27H34O3
Isisindo somzimba: 406.57
I-Melt Point: 85-87 ° C
Isitoreji sokugcina: -20ºC
I-Nandrolone Decanoate powder dosage:
I-Deca Durabolin yi-steroid esebenza ngokukhawuleza ukuba ayifanele ijojowe rhoqo. Kwiinkqubo ezininzi zonyango zonyango i-compound ilawulwa kuphela emva kweeveki ze-2-4 nazo zonke iiveki ze-3-4 eziqhele kakhulu. Ukwahlukana kuya kuba kunyango lwe-anemia; xa unyanga i-anemia Deca Durabolin ngokuqhelekileyo ilawulwa kanye kanye ngeveki. Xa kukho nayiphi na inkqubela enxulumene nokusebenza, injoza enye ngeveki iya kuba ngaphezu kokufanelekileyo. Nangona kunjalo, abanye baya kukhetha ukwahlula ukufikelela kwiibhokisi ezincinane ezimbini ngeveki ukwenzela ukunciphisa inani le-injection.
Uluhlu olulinganayo lwe-dosage yeCaua Durabolin ngokuqhelekileyo luwela kwi-100mg yonke i-2-4 yeeveki zokulungiselela unyango oluyintloko kunye ne-100-200mg ngeveki kunyango lwe-anemia. Ukuba umdlali ufuna ukuvuselelwa kunye nokukhululeka, i-100mg ngeveki yinto yokuqala yokuqala, kodwa ininzi iya kuvuya ngakumbi kunye ne-200mg ngeeveki ziphumo. I-dosing enjalo iya kuqinisekisa ukuba ukuhlaziywa, ukufumana uxolo kunye nokunyamezela konke kuphuculwe kunye nokubonelela ngokuncinci kwe-anabolic. Ukufumana inzuzo ye-anabolic yangempela, i-300mg ngeveki ngokuqhelekileyo ibhekwa njengomthamo ophantsi. Abaninzi baya kufumana i-400mg nganye ngeveki ukuba ibe yinqanaba elifanelekileyo le-dosing, kwaye kubaluleke ngakumbi, kakuhle kwizinga elilawulwayo. Amadoda amaninzi anokukwazi ukunyamezela amanani aphezulu njenge-600mg ngeveki. Oku kuya kukwandisa umngcipheko weempembelelo ezibi kwaye ngokuphindaphindiweyo i-400mg ngeveki ingaphezulu koko, kodwa iimeko ezahlukayo ziya kutyhola umphumo ngamnye.
I-Deca Durabolin ayifanele isetyenziselwe iingaphantsi kweeveki ze-8 xa isetyenziswe njengethuluzi lokuphucula ukusebenza. I-compound yenzeke ngokukhawuleza, kwaye umntu uya kufuneka ayisebenzise ixesha elide lokuvuna umvuzo. Iiveki ezisibhozo mazibe ngumncinci, kodwa emva kokuyeka isakhelo siya kuhlala sisasebenza emzimbeni iiveki ezimbalwa. Njengoko iiveki ze-8 zincinane, iiveki ze-10-12 ziya kwamkeleka kakhulu kubantu abaninzi. Ukusetyenziswa kunokunweba ngaphaya kweli nqaku kodwa kunqabile kunconywa; uninzi aluyi kuqhuba imijikelezo engaphezulu kwee-12-16 iiveki ngaphandle kweembalo ze-hardcore, kwaye kulawo matyala, ukujikeleza kwama-hormone e-steroidal kucebise kakhulu.
Kwabadlali beentombi, i-50mg ngeveki ezingekho ngaphezu kwee-4-6 kwiiveki ziqhelekileyo zonke ezinokunyamezela. Kuza kubakho abathile abanokukwazi ukusingatha i-100mg ngeveki ye-weekly, kodwa i-dose enjalo iya kubakho ukuvelisa iimpawu zezilwanyana kwiimfazana ezininzi. Izicwangciso zonyango zokwelapha eziqhelekileyo, i-Deca Durabolin iya kuqhutywa kwi-50-100mg nganye kwiiveki ze-3-4. Xa unyango lwe-anemia, i-50-100mg nganye ngeveki ifanelekile.
I-Nandrolone phenylpropionate umlinganiselo:
Kwimeko yokumisela yezokwelapha kwindoda ye-Nandrolone Phenylpropionate izisoloko ziwela kwi-50-100mg ngeveki nganye. Ukusetyenziswa kwamabhinqa, nangona kungasetyenziswa ngokuqhelekileyo ukuba kuyimfuneko, kuya kuba yinto ye-50mg ngeveki. Phantse zonke izicwangciso zonyango i-Decanoate version yinto eya ku miselwa.
Kungakhathaliseki ukuba i-dose isebenzise umthamo oqhelekileyo udlalwa ngama-injection alinganayo nganye ngeveki okanye ucwangciswe kuzo zonke iintsuku ngeziphumo ezifanelekileyo. Iiveki ze-8-12 lixesha eliqhelekileyo lokusetyenziswa kwabadlali abaninzi. Ngaphandle kwezemidlalo abadlali abangabasebenzisa i-steroid kwiiveki ze-4-6 kwaye ngokuqhelekileyo kwi dose akukho ngaphezu kwe-50mg ngeveki ukuba i-virilization ifanele igwenywe.
Izinto eziluncedo ukuthenga i-Nandrolone powder kwi-AAS Umthengisi we-Nandrolone powder:
I-3) I-AAS ingomthengisi onokwethenjelwa wezinto eziphathekayo ze-steroid ezineempahla eziphezulu zeempahla, ukuthunyelwa ngokukhuselekileyo nokukhawuleza kunye nenkonzo enhle.
tags: bathenge i-Nandrolone Decanoate powder, I-Nandrolone Decanoate powder
I-Testosterone i-Undecanoate powder yokuvuselela umzimba	Izinto ze-20 ezibaluleke kakhulu Ufuna ukwazi nge-Lorcaserin HCL powder